‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाए नेकपा दुर्घटनामा पर्छ’ (भिडियोसहित) « Janata Samachar
‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाए नेकपा दुर्घटनामा पर्छ’ (भिडियोसहित)
नेकपाभित्र के भइरहेको छ ? सुवास नेम्वाङको खुलासा
प्रकाशित मिति : 10 May, 2020 11:05 am
काठमाडौं । सुवास नेम्वाङ, पूर्व सभामुख तथा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता । नेम्वाङले राजनीतिमा सधै सन्तुलित भूमिकामा निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ । राजनीतिमा उत्पन्न जटिलतालाई सरल बनाउने खुबी छ उहाँसँग । संविधान जारी गर्दा उहाँ मुलुककाे सभामुख हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला उहाँले सन्तुलित तथा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ।
एमाले र माओवादीबीचको एकतासम्म पनि उहाँको भूमिका सन्तुलित नै रह्यो । उहाँ अहिले पनि त्यही भूमिकामा हुनुहुन्छ । मुलुकमा यतिखेर नेकपाको भारी बहुमतको सरकार छ । तै पनि सरकारले जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको आरोप लागेको छ । राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले सरकारको आलोचनाको पारो झ्न बढेको छ । केही राजनीतिक दलले सरकारलाई सांसद अपहरणको आरोप समेत लगाएका छन् ।
के हो त्यसको वास्तविता ? राजनीतिसँगै कानुनको केस्राकेस्रा केलाउँदै आउनुभएका नेता नेम्वाङले जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम खुला मञ्चमा त्यो लगायत नेकपाभित्र पछिल्लो समय देखिएको विवादबारे खुलस्त पार्नुभएको छ । नेता नेम्वाङले सरकार कुनै पनि प्रकारको आपराधिक कार्यको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले त्यसको यथार्थ संसद अधिवेशनमा आउने समेत बताउनुभएको छ ।